ဒုက္ခသည် ဖလှယ်ရေး မလေးရှား ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ဝေဖန် | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← ချိန်တန်ပြီလား မလေးရှား	မလေးရှားရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်များ အထူးသတိပြုရန် အချိန်တန်ပြီ →	ဒုက္ခသည် ဖလှယ်ရေး မလေးရှား ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ဝေဖန်	Jul 16
KH:မလေးရှားက ဒုက္ခသည်ဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်ကို သဘော တူညီခြင်းသည် သြစတြေးလျက ဒုက္ခသည် ပြဿနာကို မလေးရှားထံသို့ လက်ပြောင်း ပေးအပ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မလေးရှား ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ပါလီမန် အမတ်တဦး ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ Jeyakumar Devaraj က ပါတီ၏ ၁၃ ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက် တွင် သတင်းစာ တစောင်သို့ ပြောဆို လိုက်သည်။
“သြစတြေးလျက ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုး မထားတဲ့ နိုင်ငံကို ဒုက္ခသည်တွေ ပို့တော့မယ်၊ မလေးရှားမှာ ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သူများ အကြား ကွာဟချက် သိပ်မရှိဘူး၊ သူတို့တွေက တခြား နေထိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ အတူပဲ” ဟု ဒေါက်တာ Jeyakumar Devaraj က ဆိုသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးက ပေးအပ်ထားသည့် ဒုက္ခသည် ကဒ်ကို ရရှိထား သော်လည်း အခက်အခဲများရှိပြီး နေထိုင်ခွင့်မရရှိထားသည့် နိုင်ငံခြား သားများနှင့်တူကြောင်းလည်း သူက ဆိုသည်။
အလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း တရားဝင် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီအတွက် အလုပ် လုပ်ပေးရာတွင်လည်း အလိမ်ခံရပါက အာဏာပိုင်များထံသို့ သွားရောက် တိုင်တန်းခွင့် မရှိကြောင်း၊ တရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိသည့် အတွက် အလိမ်ခံရသည်ဟု ပြောရန် သာ ရှိကြောင်း၊ နေထိုင်ခွင့် မရှိသည့် အတွက် အချိန်မရွေး ဖမ်းဆီးနိုင်ကြောင်းလည်း ဒေါက်တာ Jeyakumar Devaraj က ဆက်ပြောသည်။
မလေးရှား ဆိုရှယ်လစ်ပါတီနှင့် သြစတြေးလျရှိ ဆိုရှယ်လစ် မဟာမိတ်များကလည်း ကြေညာချက် တစောင်ကို ပူးတွဲ ထုတ်ပြန်၍ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်သြစတြေးလျနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ အစိုးရအနေဖြင့် ဒုက္ခသည် ဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်ကို ရပ်တန့်ရန်၊ သြစတြေးလျ အစိုးရအနေဖြင့် လှေဖြင့် ရောက်ရှိလာသည့် ဒုက္ခသည် များကို လက်ခံပြီး ၁၉၅၁ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ၏ ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိသည့် နိုင်ငံများသို့ ဒုက္ခသည်များကို ပို့ဆောင်ခြင်း မပြုရန် တောင်းဆို လိုက်သည်။
ယင်း အပြင် သြစတြေးလျ အနေဖြင့် ထိုင်းအပါအ၀င်အခြားသော နိုင်ငံများဖြင့် ဆောင်ရွက်နေ သည့် ဒုက္ခသည် ဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်နှင့် လှေဖြင့် ရောက်ရှိလာသည့် ဒုက္ခသည်များကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပါပူနယူးဂီနီရှိ ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းပြန်လည်ပွင်လှစ်ရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းများတွင် ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကို စွန့်လွတ်ရန်၊ မလေးရှားအနေဖြင့် ၁၉၅၁ ကုလသမဂ္ဂ၏ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်နှင့် ၁၉၆၇ ခုနှစ် ဒုက္ခသည်များနှင့် စပ်လျဉ်း သည့် သဘောတူ စာချုပ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ဒုက္ခသည်များနှင့် ခိုလှုံခွင်ရှာဖွေသူများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ရန်လည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
“ကလေးတွေကို ကျောင်းပို့လို့မရပေမယ့် ကျန်းမာရေး ကုသခံယူမှုအတွက်တော့ ငွေက အများကြီး ပေးရတယ်၊ သြစတြေးလျက ဒီကိစ္စတွေကို လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အရာအားလုံးကို အစီအစဉ်တကျ လုပ်သင့်တယ်” ဟု ဒေါက်တာ Jeyakumar Devaraj က ပြောသည်။
Posted on July 16, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.	← ချိန်တန်ပြီလား မလေးရှား	မလေးရှားရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်များ အထူးသတိပြုရန် အချိန်တန်ပြီ →	Leaveacomment